SomaliTalk.com » 2016 » September
Home » Archive Bisha September, 2016
Sheekadii Badda ee Gen. Jaamac Maxamed Qaalib iyo Qoraa Amiin Yuusuf Khasaaro
Arinta muranka dhinaca Badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya waxaan ka hayaa labo sheeko oo xiiso leh. Sheekada Koowaad. Gen. Jaamac Maxamed Qaalib oo ka mid ahaa saraakiishii ugu saraysey ee soo mara ciidamada Soomaaliya gaar ahaan Booliiska iyo Nabad sugida, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu iiga sheekeeyey halka ay salka ku hayso Sheekada muranka dhalisay ee Soohdinta dhimaca Badda...
Tr. September 19, 2016 Muqdisho – Soomaaliya Todabaadkaan oo billaabanaya 19-ka September 2016, Dowladda Soomaaliya waxaa ay soo-jeedin afka ah ka samayn doontaa Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (“Maxkamadda”) ee Magaalada Heague, Dalka Netherlands, taasoo qeyb ka ah diidmada hordhaca ah ee 7-dii October 2015 ay soo jeedisay Jamhuuriyadda Kenya (“Dowladda Kenya”), ee ka dhanka ah...
Walaalkey iyo walaashey muslimka ahow! Waxaa fadli idiin ku filan 10kaan maalmood ee bisha Carafo in uu Allaah ku dhaartay oo Allaah yiri: ?Eebe wuxuu ku dhaartey waabariga. Iyo Habeennada tobanka ah ( Carafo).? Ibnu Abaas, Ibnu Zubeyr, Mujaahid, Ibnu Kathiir iyo Culumo kale waxey ku fasireen in ay tahay 10ka hore ee bisha Carafo. Rasuulka SCW waxaa kasugnaadey in uu yiri: “Maalmo Allaah camalka...